नेपालको सातो खाने भारतको तयारी यस्तो ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
नेपालको सातो खाने भारतको तयारी यस्तो !
काठमाण्डौ । नेपाल मामिलामा एकपछि अर्को गर्दै असफलताका श्रृङखला हासिल गरेको भारतले नेपालीलाई असजिलोमा पार्ने गरी फेरि कुनै कदम उठाउँदै छ ?
मित्रवत व्यवहार गरेर भन्दा पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पारेर स्वार्थ सिद्ध गर्दै आएको सन्दर्भमा फेरि पनि उ चुपचाप बस्छ भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । तत्काल भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने वा अत्यावश्यक सामग्री रोक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
उसले नेपाली मुद्राको विनियम दर कमजोर भएको बहानामा अवमूल्यन हुने गरी भारतको मूल्य बढाउन सक्ने बताइन्छ । हाल कामय रहेको भारुको १६० विनिमिय दरलाइ बढाएर २ सय वा त्यो भन्दा माथि बनाए नेपालमा महंगी ह्वात्तै बढ्छ ।
तत्काल नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न भारतले यस्तो निर्णय गरे भारतलाई नै झन घाटा पर्ने एक अर्थविद बताउँछन् । यसबाट भारतले निर्यात घट्ने छ,जनआस्थाले जनाएको छ ।
अर्कातर्फ भारतले बर्षाको समयमा कुनै वहाना बनाएर अत्यावश्यक सामग्रीको निर्यात घटनाउन सक्छ वा केही दिनका लागि रोकिदिन पनि सक्छ । विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण वर्षायाममा चीनबाट पनि सामान आयात गर्न सम्भव छैन ।